स्यालुट ! तमु एकताका अभियन्ताहरुलाई
हङकङका संघसंस्थाहरुले बिरलै मात्र समाज जोड्न बल पुग्ने कार्यक्रमको आयोजना गर्छन । त्यस्ता कार्यक्म नछुटाउने मेरो यथाशक्य प्रयास हुने गर्दछ । गएको आईतवार यूमातेई कम्युनिटी हलमा भएको संयुक्त तमु ल्होसार ल्होछार समन्वय समितिको कार्यक्रम त्यस्तै खालको सकारात्मक उद्देश्यमूलक कार्यक्रम थियो । त्यसो त आयोजकले निम्तो दिएका थिएनन तर फेसबुकका भित्तामा टाँसिएका सूचनाले मलाई आकर्षित गरेकोथियो । निश्चित समयमा पुगी करिब २ घण्टा त्यहाँ बिताएकोथिए ।
अन्य ठाँउको तुलनामा हङकङका तमुहरुमा ल्होसार÷ल्होछार सम्बन्धमा आश्चर्य लाग्दो विवाद देखिन्छ । तमु प्हेलु संघले एकातिर र तमु ट्यो ह्युलले अर्काेतिर तमुहरुको प्रमुख चाड १५ पुष अर्थात ल्होसार÷ल्होछार मनाउने गरेकोछ । गत साल त बिभिन्न ६ वटा संस्थाले आ–आफ्नै किसिमले यो पर्व मनाएकाथिए । तर केहि चिन्तनशील तमुहरु भने यो चाडलाई एकै ठाँउमा मनाई तमु एकताको सन्देश दिन र आफ्नो समुदायलाई एक सुत्रमा बाँधिएको हेर्न लालायित देखिन्छन् । यहि लालसालाई मुर्त रुप दिन केहि तमुजनहरु यो चाडमा कसरी तमुहरुलाई एकै ठाँउमा ल्याई एकताको चाडको रुपमा स्थापित गर्न सकिन्छ भनि अहोरात्र खटेका देखिन्छन् । त्यसैले मलाई उक्त कार्यक्रमले आकर्षित गरेकोथियो ।
यद्यपि करिब १ महिना अघि देखि नै प्रचार प्रसार गरिएको कार्यक्रममा तमुजनहरुको उपस्थिति उत्साहजनक हुन सकेन । सरोकारवाला प्हेलु र ट्यो ह्युलका कुनै पदाधिकारीहरु आईदिएनन् । आउनेहरु पनि एक डेढ घण्टा ढिलो कार्यक्रम स्थलमा आईपुगेकाथिए । तर जति आएकाथिए ति प्रतिबद्ध र तमु एकताका निम्ति गम्भीर देखिन्थे । यस अभियानलाई निस्वार्थ भावले अगाडि बढाईरहेका भारतीय भूतपूर्व संघका संस्थापक अध्यक्ष जंग बहादुर गुरुङ, ब्रिटिश गुर्खा भूतपूर्व सैनिक संघका अध्यक्ष हेमप्रताप गुरुङ, तमु साँस्कृतिक परिवारका अध्यक्ष रोशन गुरुङ, घले समाजका अध्यक्ष डम्मर घले र एनआरएनएका पूर्व सचिव मिन गुरुङ लगायत केहि चिन्तनशील ब्यक्तिहरु तैपनी किमार्थ आत्तिएका देखिदैनथे । जति आँउछन त्यतिबीच मै छलफल चलाउने भन्दै ति धैर्यताका साथ पर्खिरहेकोथिए ।
करिब २० जना तमुजन जम्मा भएपछि कार्यक्रम शुरु गरियो । बोल्ने अधिकांश वक्ताहरुले तमुहरु मिलि १५ पुषलाई एकै ठाँउमा कसरी मनाउन सकिन्छ भन्दै माथापच्ची गरेकाथिए । तिनका बोलाईमा कृतिमता थिएन । ति मनै देखि त्यस्तो बोलिरहेका लाग्दथे । मलाई जिज्ञासा लागेको के हो भने त्यहाँ आउने संस्थाका हर्ताकर्ताहरुमा पूर्वतिरका तमुहरुको बढी सहभागिता देखिन्थ्यो, पश्चिमको तुलनामा । शायद प्लेहु र ह्युलमा पश्चिमका तमुहरुको बाहुल्यता भएकोले पनि होला ति कम सहभागी थिए । हङकङमा तमु संस्थाहरुले सबैभन्दा ठुलो जनसंख्या तमुको भनि दावी गर्ने गरेकाछन् । तर तमु एकताको निम्ति भएको त्यति राम्रो कार्यक्रममा अन्तिम सम्ममा ५० जना जति मात्र मान्छे आईदिए । के हङकङका तमु एकजुट हुने १५ पुषलाई एउटा उत्सवको रुपमा मनाउन सक्दैनन ? सहभागीहरुको प्रश्न थियो, कार्यक्रममा ।
केहिका भनाईमा तमुजन्य संस्थामा आवद्ध केहि तमुहरुले नितान्त स्वतन्त्र रुपमा गरिएको यो पवित्र कार्यको जस आफुले लिन नपाउने र केहि ब्यक्तिले लगिदिने डरले पनि कार्यक्रममा नआएको धारणा ब्यक्त गरिरहेकाथिए । जबकी सार्वजनिक कार्यक्रममा तमुजन्य संस्थाका नेताहरु सबैले एक भई जानुपर्ने र १५ पुष एकै ठाँउमा मनाउनुपर्ने धारणा राख्छन । गत हप्ता भएको प्लेहुको एक कार्यक्रममा बोल्ने प्रायशः सबै वक्ताले पनि यहि कुरा डोहोर्याएकाथिए । कार्यक्रम सभापतित्व गरेका जंगबहादुर गुरुङका अगाडि हेमप्रतापले राखेका कुरा महत्वपूर्ण थिए । उनले भनेकाथिए, यो पवित्र कामको नेतृत्व दुई संस्था (प्हेलु र ट्यो ह्युल) मध्ये जसले गरेपनि हुन्छ, हामीलाई त मात्र कसरी एक ठाँउमा ल्होछार÷ल्होसार मनाउन सकिन्छ भन्ने चिन्ता मात्र छ । त्यसका निम्ति पहल गरिदिएको मात्र हो । तिनको भनाईमा केहि बर्ष अघि सम्म हङकङमा एकै ठाँउमा ल्होसार मनाईने गरिन्थ्यो, पछि मात्र दुईटा संस्थाले भिन्नाभिन्नै मनाउन थालेकाहुन् ।
यो अभियानमा लागेकाहरुलाई पद प्रतिष्ठा र जस लिने ध्याउन्न भन्दा पनि कसरी तमु एकता गराउन सकिन्छ भन्ने देखिन्छ । तिनले प्हेलु र ट्यो ह्युललाई एकै ठाँउमा १५ पुष मनाउन अनुरोध गर्नुको अर्थ सबै संस्कार संस्कृति एकै किसिमले गर्नुपर्छ भनेका पनि होईन भनि बारम्बार भनिरहेकाछन् । एकजना अभियन्ता भन्छन्, हामीले भौतिक रुपमा एक ठाँउमा मनाउने मात्र भनेका हौं । संस्थागत बिलय हौं भनेका हैनौ । त्यस्तो भेलामा प्हेलुले एकातिर आफ्नै संस्कारले कर्मकाण्ड गर्नेछ भने ट्यो ह्युलले आफ्नै किसिमले संस्कारकर्म गर्नेछ । त्यसरी जाँदा आ–आफ्नो संस्कार पनि बच्ने र तमु एकता पनि देखिने हुनाले यो अभियान थालेको तिनको भनाई थियो ।
यस्तो सत्प्रयास नेपालमा पनि भएको र त्यसले मुर्त रुप लिएकोले यो संभव छ भन्ने अभियन्तकारीहरुको विश्वास देखिन्छ । यदि यसो हो भने तमु एकताको गतिलो सन्देश दिने यस्तो कार्यक्रम हङकङका तमुजन्य संस्थाहरुकै अगुवाईमा गर्न के ले छेकेकोछ ? आफ्नो समुदाय मिलेर बसेको कसलाई मन नपर्दाे हो र । विविधतालाइ कायम राख्दै यदि एकै ठाँउमा आई केहि आधारभूत सवालमा एक हुन सकिन्छ भने तमुजन्य संस्थाहरुले यसलाई ह्दय देखि स्विकारे कसैलाई आपत्ति हुने देखिदैन, यदि जुँघाको लडाई नबनाउने हो भने । पछिल्लो समय जनजाति संस्थाहरुमा विविधताको प्रश्न उठाँउदै टुट्ने भत्कने क्रम शुरु भएको सन्दर्भमा यो अझै महत्वपूर्ण छ । तमुबाट घलेहरु पहिचान खोज्दै अलग्गै हौं भनिरहेकाछन् । मगरमा पुन र राईमा कुलुङले त्यस्तो दावी गर्दे छुट्टिन खोज्दैछन । भोलि विविध संस्कारको आधारमा ल्होछार वा ल्होसार मनाउने मध्ये कसैले हामी भिन्न संस्कृति भएकोले तमु या गुरुङ होईनौ भन्दै छुट्टिन खोजे भने त्यसले त्यो समुदायलाई कमजोर बनाउनेछ । अहिले पनि जनजाति मध्ये गुरुङ त्यति ठुलो जनसंख्या होईन । यो समुदाय अन्य जनजातिको तुलनामा संगठित र एकजुट रहेको विश्वास गरिन्छ । करिब ७ लाख जनसंख्या बोकेको यस समुदायले यदि १५ पुष संगै मनाएर आफ्नो समुदायको एकतालाई मजबुत बनाउँछ भने त्यस्तो शु–अवसरलाई चुक्न दिनु हुँदैन । यस्तो पवित्र उद्देश्य बोकी हङकङमा लामो समयदेखि लागिपरेका अभियन्ताहरुलाई ह्दय देखि धन्यवाद दिदैं यसपालिको १५ पुष देखि तिनको अभियान सफल होस र तमु एकता बलियो बनोस शुभकामना ।
फोटो श्यामसुन्दर थापा
Last Updated on Thursday, 04 September 2014 11:36
चिन्डियाक: मगरलाई गलत ईतिहास पढाउने फिल्म
लामो समयपछि हिंजो ( ८ सेप्तेम्बर) मगर रोस गुमष्ठाले युनलोगं थियटरमा प्रदर्शन गरेको मगर संस्कृतिमा आधारित भनिएको चलचित्र चिन्डियाक हेरियो । ब्यस्तताका बावजुद अर्धागिनी सीताको करकापले त्यहां पुगेकोथिए । नेपाली संस्थाहरुले हरेक साता जसो आयोजना गर्ने यस्ता कार्यक्रममा मेरो उपस्थिती शून्य जस्तो हुने गर्दछ । तिनले खाममा हाली पठाईदिएका भिआईपी पास त्यसै खेर जाने गरेकाछन । मेरो आफ्नो प्रष्ट अडान छ, यदि बुद्धि- बिमर्श र समाज लाई अगाडी बढाउने खालका कार्यक्रम आयोजना गरिएकाभए त्यसमा नबोलाईएपनि हरहालमा पुग्ने प्रयास गर्दछु तर मनोरन्जन र सम्मान जस्ता कार्यक्रम मेरा प्राथमिकताको सबै भन्दा पुछारमा रहने गर्दछ । त्यसैले गत साल दुई-दुई पटक देखाईएको यो चलचित्र हेर्न गएको थिईन ।
जस्तै हिंजै तमु एकताका निम्ति युमातेई कम्युनिटी हलमा गरिएको कार्यक्रममा नबोलाईएपनि ब्यक्तिगत काम थाँती राखेरै करिब २ घण्टा बिताएकोथिए । यहाँ यी सब भूमिका किन बाँधिरहेकोछु भने यदि हिंजो चिन्डियाक हेर्न सीताले बाध्य नपारेकोभए बित्यास पार्दोरहेछ !
सन्तोष पिठाकोटेको लेखन र निर्देशनमा चिन्डियाक सिनेमा भन्दा पनि बृतचित्र बन्न पुगेकोछ । मगर संस्कृतिमा आधारित भनिएतापनि चलचित्रमा देखाईएका केहि दृश्य ( बिवाह र नाचगान ) बाहेक त्यसभित्र के कुरा मगर संस्कृतिका छन् भन्ने नै भेउ पाईदैन । घाँटु, मारुनी, कौडा, झ्याउरे गीत राख्दैमा त्यसलाई मगर संस्कृतिमा आधारित चलचित्र भन्न सकिदैन । किनकी कथाबस्तु नै त्यसको सेरोफेरो घुम्दैन । सिनेमालाई एउटा कथाले डोहोर्याएको हुन्छ तर चिन्डियाकमा त्यस्तो कथा नै छैन । तनहूको एउटा गाँउमा साथीको लोकन्ती बनी जन्त गएको नायकको त्यसै गाँउको एक युवती जसलाई आफ्नो भाषा बोले र ड्रेस लगाए मगर संस्कृति बच्छ भन्ने लाग्दछ,संग प्रित बस्दछ । नायकलाई पनि आफ्नो समुदायको भाषा संस्कृति बचाउन चेतना बाँड्नुपर्छ भन्ने चेत छ । खैरेनी पढिरहेको नायक फर्किएकोबेला युवतीलाई लाहुरे माग्न आँउछ र तिनको बुवाले छोरीलाई नसोधीकनै बिवाहको छिनोफानो गरिदिन्छन । छोरी आमासंग प्रतिवाद गर्छिन तर उनको ज़ोर चल्दैन । केटी आईपरेको समस्या नायकलाई फ़ोन गरि बेलिबिस्तार लगाउछिन । नायकले उनलाई खैरेनी डाक्छन् । बहिनीको सहयोगमा केटी खैरेनी पुग्छिन र केटासंग उनको गृहजिल्ला पुगी बिवाह बन्धनमा बाँधिन्छन् ।
चलचित्रको कथा यति हो । यो कथामा मुलधारका दर्जनौ सिनेमा बनेकाछन । नयाँपन केहि छैन । मुलत: कथाको अन्तर्बस्तु हो । चलचित्रमा बारम्बार 'भाषा बोले र मगर पोशाक' लगाए मगरको पहिचान सुरक्षित हुन्छ र लाहुरे हुनु भन्दा पढ्नुपर्छ भन्ने सन्देश दिन खोजिएकोछ तर ठाडो पारामा । भाषाका निम्ति म्याग्दीको मगर ढुट नजान्ने एक पुन थरकी युवतीलाई खडा गरिएकोछ । ति पात्रलाई अगाडी सारि बहुसंख्यक मगरहरुले आफ्नो भाषा बोल्न नजान्नुका पछाडि जे कारण दिईएकोछ त्यो झारा टार्ने खालको छ । त्यति गम्भीर बिषयमा त्यो बिध्न उपेक्षाले लेखकको बौद्धिक स्तर देखाँउछ ।
त्यसैगरि शिक्षा प्रवद्धन गर्न प्रमुख पात्रहरुलाई कलेज हिंडेको पनि देखाईएकोछ । तर पढ्नुपर्छ, मगर संघ मार्फ़त राजनीति गर्नुपर्छ भनि शिक्षा दिदै हिंड्ने नायकले नै समस्या आँउदा पढ़ाई पूरा नहुदै पढिरहेकि नायिकालाई भगाएर बिवाह गर्ने परम्परागत शैली अपनाउँछ,जुन फिल्मले दिन खोजेको सन्देशसंग तारतम्य नै मिल्दैन । चलचित्र भरि मगर जागरूक हुनुपर्छ भन्दै नाराबाजीको शैलीमा आग्रह गरिएकोछ,जसले सिनेमा हैन बृतचित्र हेरेको महसुस गराँउछ । आफ्नो कुरा भन्ने लेखकको रचनात्मकता रत्ति देखिदैन । चलचित्र जति निरस छ त्यो भन्दा ख़तरनाक बदमासी त्यसभित्र भएका पटकथाका दृश्यहरुमा छन्, जुन लेखकको जानकारीमा भएको देखिन्छ !
एउटा दृश्यमा मगर भाषाको पहिलो उपन्यास भन्दै स्याग्जाका लोकबहादुर थापा ( झुस्याहा मगर ) को एउटा कृतिलाई अनावरण गरेको देखाईएकोछ । जबकि मगर बुद्धिजिवी दुनियालाई थाहा छ, उदयपुरका सन्जोग लाफाद्वारा लिखित 'रेवस' मगर भाषामा लेखिएको पहिलो उपन्यास हो । धनकुटा घर भएका भनिएका पिठाकोटेलाई यो जानकारी नभएको कसरी मान्ने ! कार्यक्रममा ळेखक थापा स्वंय आमन्त्रित छन् ।
यो नाम राख्ने लोभमा थापा स्वंयको बदमासी हो वा लेखकको तर आफ्नो नाम राख्ने जस्तो तुच्छ बदमासीका निम्ति किन सिनेमा नै दुरुपयोग गरियो भन्ने कुरा चाहिं उदेक लाग्दो छ । माओवादीका मगरात मुक्ति मोर्चाका योजनाकार थापालाई प्रोजेक्ट गरिएको उक्त कार्यक्रममा प्रथम शहिद लखन थापासंगै मगर भाषाका आदिकविको तस्वीरमा धूप बालेर सम्मान दिईएकोछ । जबकि सिन्जाली जिउदै छन । सबैलाई थाहा छ, मगर संघले आदिकविको खिताव दुई जनालाई दिएकोछ । सिन्जाली र सुवेदार रेखबहादुर सारु मगरलाई ।
सिनेमामा देखाईएको तनहूको मगरसंघको एउटा इकाई समितिको उक्त कार्यक्रमका दिवंगत रेख बहादुरको फोटो नै राखिएकोछैन ।आयोजकलाई आफ्नै गृहजिल्लाका आदिकवि सारुबारे थाहा नहुनु र त्यहाँ आएका प्रमुख अतिथि लोकबहादुरले यसमा औला नदेखाईदिनुले चलचित्र बनाउनेले यो सिनेमा मगरलाई जागरूक बनाउन भन्दापनि भ्रम र अन्यौल छर्ने राजनीतिका निम्ति बनाएको देखिन्छ ।
हगंकगंमा मात्र ३ पटक यो सिनेमा देखाईएकोछ । अन्य ठाँउमा पनि देखाईयो होला । आफुलाई यत्रो त्रुटीबारे कसैले भनेको र लेखेको थाहा छैन । मगरसंघले त ध्यान दिएन रे ठिकै छ तर मगर चलचित्रकर्मी संघ, मगर लेखक संघ, आदिवासी चलचित्रकर्मीसंघले चाहि भ्रम छर्ने र यस्तो ख़तरनाक सन्देश प्रवाह गरिरहेको सिनेमा चलिरहदा चाहि के हेरिरहेकोछ कुन्नि ! मगर संस्कृतिका नाममा मगरकै ईतिहासलाई मेटाउन खोज्ने र ग़लत ईतिहास स्थापित गराउन खोज्ने राजनीति बोकेको सिनेमा भित्रका यी दृश्यहरु सम्बन्धमा नजानेर नबोलिएको हो कि जानेर पनि मौन बसिएको हो पत्तो भएन । तर यदि हिजों यो सिनेमा हेर्न नगएकोभए मैले पनि यति ठुलो बदमासी देख्न पाँउथेन । त्यसैले त्यहाँ ज़बर्दस्ती लैजाने सीतालाई धन्यवाद दिएको हुँ ।
Last Updated on Thursday, 04 September 2014 11:41
वार्ताको विकल्प वार्ता
जनजाति महासंघ र नेपाली महाबाणिज्यदुत कार्यालयबीच चलेको दुई चरणको वार्ता विफल भएपछि महासंघले गएको आईतवार डाकेको नेपाली संघसंस्थाहरुको भेलाले आन्दोलनकारीलाई एउटा प्रष्ट म्यान्डेट दिएकोछ । एनआरएनए, हङकङ नेपाली महासंघ, चेम्बर अफ कमर्स, गोर्खा भुपु सैनिक संघ लगायत यहाँ स्थित राजनैतिक दलका भातृसंगठनका प्रमुखहरुको भेलाले महासंघलाई आन्दोलनको स्वरुप परिवर्तन गर्न एक खालको निर्देशन नै दियो । तिनले महासंघको माग राजनीतिक रहेको जसको कडी र जड नेपालमा भएकोले आन्दोलनको दवाव काठमाण्डुमा दिन सुझाव दिएकोछ । महासंघको हङकङ केन्द्रित संघर्षको ठिक उल्टो यस्तो सुझावलाई महासंघले अवज्ञा गरेर जान सक्ने अवस्था छैन ।
वार्ता विफल भएपछि महासंघले सात बर्ष देखि चलिरहेको महाबाणिज्यदुत बहिष्कारको आन्दोलनलाई कसरी लैजाने भनि राय बुझ्न यहाँका संस्थालाई डाकिएको बताएकोले सहभागीहरुको सुझाव महासंघका लागि निर्देशन सरह मान्नुपर्ने बाध्यता जस्तैछ । किनकी बहुसंख्यक संस्थाले दिएको सुझावलाई उपेक्षा गरि एकलकाँटे रुपमा अघि बढ्ने मुर्खता गर्नु महासंघकै निम्ति प्रत्युत्पादक हुनसक्छ भन्ने तिनका नेताले बुझेकाछन् ।
सात बर्ष अघि शुरु जनजाति महाबाणिज्यदुतको मागले संघर्षको लामो उतारचढाव भोगेको जनजाति नेताहरु बताँउछन् । तिनलाई सुन्दा यो आन्दोलनलाई लम्ब्याउने र उग्र बनाउने पक्षमा ति पनि छैनन । हङकङ जस्तो ब्यस्त शहरमा यसरी समय ब्यतित गर्ने फुर्सद कसैलाई छैन । तर शुरु गरिसकेपछि छाड्न नसकिने र आत्मसम्मानको रुपमा यसको स्वरुप बिकसित भैदिएपछि यसले दिनवदिन द्धन्द्ध बढाउँदै लगिरहेकोछ । नेपाली समाजलाई ध्रुबीकरण गराईरहेकोछ ।
हङकङका सडकमा गाजाबाजा र नाराबाजी सहित आफ्नै देशका महाबाणिज्यदुतको विरोध गर्दै सडकमा हिंडेपछि त्यसको नकारात्मकता हङकङका सबै नेपालीले भोग्नुपर्न हुन्छ । स्थानीयबासीमा हामीलाई हेर्ने परम्परागत दृष्टिकोणमा थप नकारात्मकता थपिदिनसक्छ । यो आन्दोलनकारीले पनि बुझेकाछन् तर तिनका पछाडि रहेको अनगिन्ति ब्यक्तिका स्वार्थ र इखका कारण ति यसलाई उपेक्षा गरेर भएपनि आन्दोलनको फेरो समाईरहन बाध्य छन् ।
दोश्रो चरणको वार्ताको बेला लिईएको तस्वीर
मुल जड प्रमुख राजनैतिक ति शिर्षस्थ नेताहरु हुन् जसले सधै ‘आन्दोलनकारीहरुका अगाडि ठिक्क पर्दे झुठा आश्वासन दिने र नेपाल फिरि कार्यान्वयन गर्ने बेला ठिक उल्टो गरिदिने ।’ दलका नेताहरुको यस्तो ढाँट र उपेक्षाका कारण जनजाति नेतृत्व चिढिएकाहुन् । त्यसैले यो आन्दोलनलाई उग्र र हिंसक बनाउन खोिजरहेका देखिन्छन्, जुन नेपाली समाजका अगाडि ठुलो दुर्भाग्यको रुपमा मुख बायर खडा छ । आन्दोलनकारीले दलका नेताहरुको रिस यहाँ पठाईने महाबाणिज्यदुतमाथि खन्याईरहेकाछन् ।
यसअघिका महाबाणिज्यदुत विनोद कुमार उपाध्यायलाई यसको पीडा राम्ररी थाहा छ । जनजाति आक्रोशको तारो उनी मात्र भएनन् त्यसको शिकार उनका दाजु तथा एमालेका बरिष्ठ नेता माधव नेपाल समेत हुनुपर्यो । उनले भाग लिएको एउटा कार्यक्रममा महासंघका कर्याकर्ताहरु गई कालोझण्डा देखाउदै नाराबाजी गरे । नेपालको राजनीतिमा विदेश भूमीमा जनजातिहरुले यसरी कालोझण्डा देखाई विरोध प्रदर्शन गरेको यो नै पहिलो घट्ना थियो । यस्तो घट्नाको प्रभाव र असर कति ठूलो हुँदो रहेछ भने त्यसपछि यो हावा बेल्जियममा पुग्यो र एमालेकै पूर्व गृहमन्त्री भीम रावललाई त्यसैगरि कार्यक्रममा हस्तक्षेप गरि कालोझण्डा देखाईयो । त्यसपछि त्यो पोर्चुगल, सिडनी हुदै युके आईपुगेकोछ । अमेरिकामा नेकाका सभापति सुशिल कोईरालालाई दुरुस्त त्यहि शैलीेले विरोध जनाईयो भने युकेमा तिनकै युवा नेता गगन थापालाई त्यसैगरि विरोध गरियो । यस्तो दुर्दशा दलका नेताहरुले स्वंय निम्त्याएकाहुन् ।
हङकङमा पनि यो कुरा लागु हुन्छ । यदि शिर्षस्थ नेताहरुले आफुहरुले गर्न नसक्ने कामको आश्वासन नदिएकोभए अहिले यो विध्न संघर्ष चर्कने नै थिएन । माधव नेपाललाई कालो झण्डा देखाएयता हङकङमा शिर्ष नेताहरुको आगमन लगभग ठप्प छ । जबकि त्यसअघि एक खालको प्रतिस्पर्धा नै थियो, यहाँ आउने । कहाँसम्म भने हङकङमा सबैभन्दा बढी आउने प्रचण्ड समेत जनजाति विरोध खेप्नुपर्न सुचनाका कारण एयरपोर्टमै खुसुक्क कार्यक्रम गरेर फर्कनुपर्यो । किनकी सबैभन्दा बढी आश्वासन यहाँका जनजातिलाई उनैले र उनका नेताहरुले दिएकाथिए । तर आफ्नै दलको सरकार भएकै बेला नवनियुक्त महाबाणिज्यदुत महेश प्रसाद दाहाललाई पठाएर तिनले जनजातिहरुलाई ठाडै बिच्काउने काम गरेकाथिए । त्यसयता हङकङमा माओवादीको ठुलो कार्यक्रम नै हुनसकेकोछैन ।
तिनलाई यहाँ कार्यक्रम नगरे के गुम्छ त्यो जोडघटाउ गरेरै महाबाणिज्यदुत नियुक्त गर्ने निर्णय गरे होलान् तर त्यसको दोष जति यहाँ पठाइएका दाहालले भोग्नुपरिरहेकोछ । एउटा महाबाणिज्यदुतको सबैभन्दा ठुलो सफलता–असफलताको मापन सम्बन्धित देशको सत्तासंग कस्तो कुटनीतज्ञ सम्बन्ध बढाए भन्दा पनि आफ्नो देशका समुदायसंग कस्तो सम्बन्ध कायम राख्न सके भन्नेसंग जोडिन्छ । नयाँ महाबाणिज्यदुतले यहि परिक्षा उत्तिर्ण गर्न सकेका छैनन् ।
तर अब यसलाई लम्ब्याउनु उचित छैन । महाबाणिज्यदुतले जिते पनि जनजाति महासंघले जितेपनि यो द्धन्द्धमा हामीले गुमाउने पनि धेरै कुराहरु छन् । त्यता पनि ध्यान दिन जरुरी छ । महासंघको माग जनजातिको मात्र होईन यो अधिकारसंग सम्बन्धित माग भएकोले यो सबै नेपालीको माग हो र हरेक नेपालीले यस आन्दोलनको प्रत्यक्ष परोक्ष असर भोग्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले अब महासंघ र महाबाणिज्यदुतले वार्ता विफल भो भन्दैमा संवादलाई छाड्नु हुदैन । त्यसले दुबैलाई भलो गर्देन । नेपाली संस्थाहरुले दिएको सुझावलाई शिरोधार्य गर्दे महासंघले तत्काल केहि बोल्ड निर्णय गर्न जरुरी छ । त्यसैगरि महाबाणिज्यदुतावासले पनि वार्ताको न्युनतम मर्यादालाई ख्याल राख्दै के बोल्ने के नबोल्ने भन्ने लक्ष्मणरेखा कोर्न जरुरीछ । दोश्रो वार्तामा महाबाणिज्यदुतले राखेको ‘म अरु संस्थाको कार्यक्रममा जाँदिन एनआरएनए र चेम्बर अफ कमर्सकोमा नगई हुदैंन’ भन्ने जस्ता वार्तारत पक्षलाई बिच्काउने माग र भनाई राखिनु हुदैैन । त्यसैकारण बिच्किएको वार्तामा सहभागी महासंघका प्रतिनीधिहरुको भनाई थियो । कुटनीतिज्ञलाई यस्ता कुरा पेश गर्ने अनेकन कुटनीतिक उपायहरु सिकाइएका हुन्छन् महाबाणिज्यदुतले त्यो अगींकार गर्न सकेको देखिएन । आईन्दा त्यसमा ध्यान दिन जरुरी छ ।
जनजातिहरुले के बुझेकाछन भने यी महाबाणिज्यदुतलाई फर्काउन सकिदैन । तर ति केहि कुरामा आश्वस्त हुन चाहन्छन् । त्यसका निम्ति वार्तामा महाबाणिज्यदुतले एउटा गम्भीर कुरा गरेकाछन् । ‘यसअघिका महाबाणिज्यदुतलाई दिइएको लिखित माग सम्बन्धित निकायमा नपुगेको हुनसक्छ त्यसैले पुनः लेखेर दिनोस म सम्बन्धित निकायमा पुरयाईदिन्छु’ भन्ने दाहालको प्रस्ताव स्वागतयोग्य ठानिनुपर्छ । तर महासंघ त्यतिले आश्वस्त हुन नसकेको हो भने अब तुरुन्त यी निम्नलिखित कुरामाथि छलफल गर्न सकिन्छ ।
१– महाबाणिज्यदुतले महासंघको मागलाई सम्बन्धित निकायमा पुर्याईदिने । विश्वास दिलाउन परराष्ट्र मन्त्रालयका जिम्मेवार ब्यक्तिसंग महासंघको प्रतिनीधिको भेट गराई सम्झौतापत्र या कुनै आश्वस्त पार्ने कार्य गरिदिने । त्यसका निम्ति महाबाणिज्यदुत सहित जनजाति महासंघका प्रतिनीधिहरु स्वदेशमै जान सक्छन् या परराष्ट्रका पदाधिकारी हङकङमै आउन पनि सक्छन् । सुविधा अनुसार काम गर्न सकिन्छ । यसले महासंघलाई सुरक्षित अवतरण गर्ने बाटो दिन्छ ।
२ त्यसैगिर जनजाति महासंघले पनि महाबाणिज्यदुतलाई संस्थाहरुमा गरेको छेकवार फुकुवा गरिदिने र उनलाई बढी भन्दा बढी नेपाली समाज र स्वदेशको हितका लागि काम गर्न बाध्य बनाउने ।
३– महाबाणिज्यदुतावासका कमी कमजोरी र सुविधाहरुलाई कसरी अधिकाधिक नेपाली समुदायको पक्षमा गराईने भन्ने कुरा दुबै पक्ष टेबलमा बसेर निक्र्याेल गर्न सकिन्छ । त्यसरी महाबाणिज्यदुतको गरिएको पुर्नसंरचनाको जस जति महासंघलाई दिए कसैको केहि बिग्रदैन बरु राम्रै हुन्छ ।
४– यति हँुदाहुदै मुलतः यो माग पुरै राजनीतिक भएको र निर्णय क्षमता प्रमुख दलको हातमा रहेकोले ती दललाई यस मुद्दामा पुर्ण रुपले सहमत बनाई अर्को पटक जनजाति महाबाणिज्यदुत पठाउने वातावरण बनाउन बाध्य पार्ने काम यहाँ स्थित ति दलका भातृसंस्थाका हुन् । महासंघलाई अस्ति भएको कार्यक्रममा तिनले त्यस्तो सहयोग दिने बचन दिईसकेकाछन् । तिनलाई झक्झक्याउदै रहने र महाबाणिज्यदुतलाई स्वतन्त्रतापुर्वक काम गर्न दिए महासंघको आन्दोलन पनि चलिरहने र त्यसले सफलता प्राप्त गर्न पनि सक्ने छ। महाबाणिज्यदुतले पनि नेपाली समाज र देशका लागि राम्रो काम गर्न सक्छन, जुन अहिले सम्म हुन सकेकोछैन ।
आशा छ यसमा दुबै पक्ष सहमत हुनेछन् र बुद्धिमता र दुरदर्शिता देखाई हङकङबाट फेरि एउटा सकारात्मक कर्मको सुत्रपात गरिदिनेछन् ।
Last Updated on Thursday, 04 September 2014 11:42
हरे ! कहिले सुध्रन्छन हङकङका नेपाली नेताहरु
हङकङका नेपाली संस्थाका टाउकेहरुलाई कहाँ, के र कसरी प्रस्तुत हुनुपर्छ भन्ने न्युनतम ज्ञान पनि रहेनछ भन्ने पछिल्लो दृष्टान्ट मेरो निर्देशनमा तयार भएको ‘जातीय राजनीतिको हङकङ कनेक्सन’ बृत्तचित्रको प्रिमियर प्रदर्शनीमा उदाँगो गरि छरपरस्ट भएकोछ । हङकङमा ७ बर्ष देखि आदिवासी जनजाति महासंघ हङकङले थालेको जनजाति महाबाणिज्यदुत मागको आन्दोलन सम्बन्धमा तयार पारिएको यस बृत्तचित्रका प्रमुख पात्रहरु महाबाणिज्यदुत महेशप्रसाद दाहाल, जनजाति महासंघका अध्यक्ष एमवी थापा, एनआरएनएका अध्यक्ष दुर्गा गुरुङ, चेम्बरका जेएन ज्ञवाली, एमाओवादी हङकङका सचिव जेवी ओख्राबु, गुर्खा भूपूका हेमप्रताप गुरुङ लगायतका यहाँका संघसंस्थाका प्रमुख ब्यक्तित्वहरु मेरा कार्यक्रमका पाहुना थिए । तिनलाई स्वंय मैले ब्यक्तिगत रुपमा अनुरोध गरि त्यहाँ डाकेकोथिए ।
समाजलाई असाध्यै ध्रुबीकरण बनाईरहेको जनजाति महासंघको यो मागलाई कसरी ब्यवस्थापन गर्ने भन्ने सवालमा नेपाली समाजका बहुसंख्यक सदस्यहरु चिन्तित छन् । त्यसो त जनजाति महासंघ स्वंय यसलाई लम्ब्याउने भन्दा कसरी आफ्नो गरिमा र आत्मसम्मानलाई जोगाँउदै यो संघर्षलाई ब्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भन्ने चिन्ताले दुई दुई पटक महाबाणिज्यदुतावासको कार्यालयमा वार्ताको टेबलमा बसिसकेकोछ ।
त्यसैलाई मध्यनजर राखि मैले त्यसै बिषयमा तयार पारेको बृत्तचित्रको पहिलो शो यिनै सरोकारवालाहरुबीच देखाउने निधो गरेकोथिए । एउटा पत्रकारले जनजाति महासंघको यो आन्दोलनलाई जे देखेकोछ त्यसैको आधारमा तयार पारेको हुनाले यसको संयोजनकारी भूमिका खेलिदिन नेपाल पत्रकार संघ हङकङका अध्यक्ष किसन राईलाई अनुरोध गरेकोथिए । त्यस दिनको कार्यक्रम संयोजन संघले गरेकोथियो । यद्यपि पाहुनाहरुलाई म स्वंयले आमन्त्रित गरेकोथिंए ।
जनजाति महासंघले महाबाणिज्यदुतलाई कुनै पनि कार्यक्रममा नबोलाउन उर्दी जारी गरेको परिप्रेक्ष्यमा यो आन्दोलनको पक्ष बिपक्षलाई कम्तिमा एकै ठाँउमा राखी अनौपचारिक रुपमा भएपनि भेट गराउन सके त्यसले सहज वातावरण श्रृजना गर्ला भनि यो भेटको आयोजन गरिएकोथियो । यदि जनजाति महासंघबाट विरोध वा धम्की केहि आएछ भने त्यो म स्वंय ब्योहोरुला भनि एउटा रिस्क उठाएकोथिएं । त्यसको बदलामा यस्तो भेटले भोलि हुने दुई पक्षबीचको वार्तालाई सहजीकरण गर्ने मेरो बुझाई थियो,जुन नेपाली समाजको निम्ति सुखद परिणाम हुन सक्थ्यो । साथै, दिवगंत पत्रकार मित्र देव पाटाको निम्ति आर्थिक कोष तयार पार्न निकट भविष्यमा च्यारिटी शो गर्न गैरहेको र नेपालमा पनि सरोकारवालाहरुबीच यसलाई प्रदर्शन गरिने हुनाले बृत्तचित्रमा भएका कमीकमजोरी माथि सुझाव आँउछ कि भनि हङकङका सरोकारवालाहरुलाई डाकिएकोथियो ।
तोकिएको समयमा आईदिएका दुई पक्षका पाहुनाहरुको एकापसमा भेट हुनु मेरा निम्ति सुखद क्षण थियो, त्यो । त्यस्तो वातावरणमा दुई पक्षले संगै बसी आफ्नै बारेमा बनेको पौने घण्टाको चलचित्र शान्तसाथ हेरिदिए । सबै पाहुनाहरुको भद्रता उल्लेख्य थियो । तर बृत्तचित्र सकिनासाथ शुरु भएको त्यसभित्रको कन्टेन्टलाई लिएर किसन राई ( उनले बोलेका केहि क्लिप्सलाई लिएर उठेको प्रश्न) माथि प्रश्न शुरु भएपछि बहसले भने गलत ट्रयाक समात्न पुग्यो । यदि प्रश्नोत्तर सम्बन्धित बिषयमा मात्र सिमित भएकोभए त्यसले राम्रो अन्र्तक्रिया गर्न सहयोग पुग्थ्यो पनि होला तर प्रश्नोत्तरको सिलसिला यति अभद्र र असभ्य हुन पुग्यो कि उपद्रो तरिकाले प्रस्तुत भएका संस्थाका नेताहरु नै ब्यक्तिगत गालीगलौजमा उत्रन पुगे, आ–आफ्ना समस्यामाथि भडास निकाल्न शुरु गरे, जुन अत्यन्त दुखद मान्छु म । किसन राई त्यहाँ जनजाति आन्दोलनकारी र उनको पत्रिकाको सम्पादकको हैसियतमा थिएनन उनी पत्रकार संघका अध्यक्षको हैसियतले कार्यक्रम संचालन गरिरहेकाथिए, जुन मेरो अनुरोधमा उनले त्यो भूमिका निर्वाह गरिरहेकाथिए ।
तर उनी माथि खनिएकाहरुले राईले जनजाति आन्दोलन, विद्रोही एनआरएनलाई पुर्याएको सहयोग, बृत्तचित्रमा बोलेका आफ्नो दृष्टिकोण र उनले लेखेको समाचारलाई लिएर अत्यन्त तुच्छ शब्द प्रयोग गरि गाली गलौज गर्ने कार्य भए । दुखद के हो भने त्यस्तो गर्नेहरुमा संस्थाका टाउकेहरु नै थिए । तिनले कार्यक्रम कसले, किन र के प्रयोजनका लागि आयोजन गरेको हो भन्ने सामान्य नम्स समेत बिर्सन पुगे । यो सबै कृत्य महाबाणिज्यदुत र समाजका गन्यमान्य ब्यक्तित्वहरुकै माझ हुन गयो । त्यहि बीच पत्रकारितालाई समेत गाली गर्ने काम भयो, जुन मेरा निम्ति अत्यन्त खेदजनक कुरा हुन । आफै नागिंनेगरि किन यस्ता कृत्य गरिन्छन् स्वंय नेताहरुले शान्त दिमागले आफैलाई सोध्ने हो भने भविष्यमा यस्ता गल्ति नदोहोरिएलान कि ? तर एउटा महत्वपूर्ण कुरा के बिर्सन हुदैंन भने पाहुना मान्न गएपछि त्यसको सामान्य प्रतिष्ठा र ईज्जत राख्न सक्नुपर्छ । यति ज्ञान समेत तिनमा नदेखिएको हुनाले मेरा निम्ति यसलाई एउटा पाठको रुपमा लिएकोछु । एक पटक त नेपाली समाजका नेताहरु द्धन्द्ध र विवाद साम्य नहोस भन्ने भित्री उद्देश्य नै राखि कार्यक्रम बिथोल्न खोजेका त होईनन भन्ने मनमा समेत पर्न गयो ।
तर यसका बावजुद जनजाति महासंघका अध्यक्ष र महाबाणिज्यदुतले जुन सौहार्दता र भद्रतापूर्वक संयम नगुमाई आफ्नो बिचार राखे त्यसले मेरो कार्यक्रम सफल भएको ठानेकोछु । दुबै पक्षले राखेको भनाई मिलेर जाने र वार्ताको विकल्प नभएको भन्ने थियो, जुन नेपाली समाजका निम्ति शुभ समाचार हो । म लगायत हङकङेली नेपाली समाज सबै यो आन्दोलनले एउटा टेको लेओस र सबै शान्तपूर्वक बस्न पाईयोस भन्ने शुभेच्छा पालिरहेकाछन । त्यसैले पनि सम्पूर्ण समाजका नेताहरुले गम्भीरतापूर्वक आ–आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न जरुरी छ भनेको हुँ ।
मेरो निम्तोलाई स्विकारी आफ्नै समाजको आईनालाई हेरिदिन आउनुभएका महाबाणिज्यदुत दाहाल लागयतका पाहुनाहरुले त्यस दिन जे जस्ता अप्ठ्याराहरु भोग्नु भो र विशेषगरि पत्रकार संघका अध्यक्ष किसन राईले मेरो कार्यक्रममा मेरा निम्ति जे अपमान ब्योहोर्नु पर्यो त्यसका निम्ति म अत्यन्त लज्जित छु । आशा छ, यहाँहरुले तत्कालिन समयको गाम्भीर्यतालाई बुझिदिनुहुनेछ र मलाई माफ गर्नुहुनेछ ।
Last Updated on Thursday, 04 September 2014 11:45
किन विफल भो जनजाति-महाबाणिज्यदुत वार्ता
७ जुलाईका दिन हङकङ महाबाणिज्यदुताबासमा वार्तामा ३ घण्टा बिताएका जनजाति महासंघका प्रतिनीधिहरुले तयारी नपुगेकोले वार्ता निस्कर्ष बिहिन भएको भन्दै प्रेस विज्ञप्ति छरेकोछ । तर ७ बर्ष देखि जनजाति कन्सुलर चाहिन्छ भन्दै निरन्तर आन्दोलन गरिरहेको जनजाति महासंघलाई किन र के को लागि यति लामो तयारी समय चाहियो भन्ने त्यसमा खुलाइएकोछैन । बिज्ञप्ति पढ्दा मुलतः त्यो वार्ता नभई परिचयात्मक कार्यक्रम जस्तो देखिन्छ । सदा हुदैं आएको झैं यसपालिको वार्तामा पनि जनजातिले आफ्ना दुखःब्यथा कहे उताबाट महाबाणिज्यदुतले आफ्ना लाचारी रोए । बिज्ञप्तिमा लेखिएका शब्दहरुले पनि त्यस्तै बताउँछन् । यथार्थमा तयारी नपुगेर होईन वार्तामा दुबै संस्थाका आ–आफ्ना सिमितता र बाध्यताले गर्दा वार्ता सफल हुन नसकेको हो ।
वार्ता अघि महासंघ निवर्तमान अध्यक्ष भुपेन्द्र चेम्जोङसंग हात मिलाउदै महाबाणिज्यदुत महेशप्रसाद दाहाल,
बांया वर्तमान अध्यक्ष एमवी र दांया बाणिज्यदुत किरण शाक्य
बिज्ञप्ति अनुसार कन्सुलर र जनजाति महासंघका प्रतिनीधिहरुबीच २१ जुलाईमा तयारीका साथ पुनस् बस्नेगरि वार्ता सकाएको जनाइएकोछ । महासंघले बुधवार वितरण गरेको प्रेस बिज्ञप्तिमा वार्ता र माग प्रति नयां महाबाणिज्यदुत महेशप्रसाद दाहाल सकारात्मक र सहयोगी रहेको जनाइएकोछ । उनलाई हङकङमा किन जनजाति महाबाणिज्यदुत आवश्यक छ भनि गरिएको ब्रिफिङमा महासंघका प्रतिनीधिहरुले यसअघिकाले हिन्दु धर्म, खस र तिनका संस्थालाई पोसेको जनजातिलाई उपेक्षा गरेको बताइएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । लेखिएकोछ,“नेपाल सरकारको पैसामा तीज र दशैं जस्ता चाड मनाईने र हिन्स जस्तो बाहुन क्षेत्रीको संस्थालाई काखी च्यापेको“ ले जनजाति महाबाणिज्यदुत माग राखिएको हो । नेपालमा समावेशीताको अभ्यास हुन थालेको र बहुसंख्यक जनजाति बसोबास गर्ने हङकङमा जनजाति महाबाणिज्यदुत पठाएर त्यसको उदाहरण पेश गर्न पनि आफुहरुले यो आन्दोलन उठाइएको त्यहां बताइएको महासंघले नै बताएकोछ । तयारीका लागि महासंघले १४ जुलाईमा छलफल गर्न सबैलाई डाकिएको र त्यहांबाट म्यान्डेट लिएर वार्तामा बस्ने छनक दिएकोछ ।
बिज्ञप्तिमा जनाईए अनुसार, कन्सुलर समक्ष दुईटा माग राखिएकोछ – पहिलो, या महाबाणिज्यदुत स्वदेश फर्कने या नेपालीले आयोजना गर्ने हङकङको कुनै पनि सार्वजनिक कार्यक्रममा सहभागी नहुने । यी दुबै महाबाणिज्यदुतले गर्न नमिल्ने यस्ता अप्ठ्यारो माग हुन् त्यसमा सहमति हुने छाँट देखिदैन । उताबाट नबोलाए दाहाल ४ बर्ष सम्म फर्कने संभावना जिरो छ । यो उनले अस्तिको बैठकमा महासंघका प्रतिनीधिहरुलाई प्रष्ट सुनाई सकेकाछन् । त्यहां सहभागी एक जनाको भनाईमा उनको भनाई त्यस विषयमा कुरै नगरौं भन्ने अर्थको थियो । त्यो उनको भनाई भनि कोट गरिएको महासंघको बिज्ञप्तिबाट पनि बुझ्न सन्किछ । त्यसको अर्थ उनी दोश्रो विकल्पमा मात्र कुरा गर्न सक्छन् ।
तर सामाजिक रुपमा नभिजी नहुने एउटा महाबाणिज्यदुत सामाजिक संस्थाको कार्यक्रममा नगई कसरी रहन सक्छन् ? उनी त्यसैका लागि जनजाति महासंघसंग वार्तामा बसेकाहुन् । संस्थामा नजाने हो भने त्यति सुविधा त अहिले वार्तामा नबसेपनि उनले भोगी नै रहेकाछन्, अनि वार्ताको औचित्य के त भन्ने प्रश्न उठिहाल्छ । जनजातिले विरोध गरिरहेकाछन् उनी बोलाइएका छैनन् । तर उनले आफ्नो नोकरी पकाईरहेकैछन् ।
निवर्तमान महाबाणिज्यदुतसंगको सम्झौता
वार्ता भनेको लेनदेन हो ।तर अहिले गरिएको वार्तामा लेनदेन हुनेगरि कुरै भएको देखिदैन । दुबैले आ आफ्ना समस्या सुनाएर वार्तामा आउनुपर्ने मूल कुरा मुट्ठी पारेर बसिरहेकाछन् । सबैलाई थाहा छ, महाबाणिज्यदुत सरकारले निर्णय गरेर पठाइएकोले उनलाई धारे हात लगाउदै बहिष्कार गर्नुले तत्काल परिणाम दिदैन । तर एउटा सत्य के पनि हो भने त्यसले नेपाल सरकारलाइ सुन्न बाध्य बनाउने पूर्वाधार भने तयार पारिरहेकोछ । स्वयं महाबाणिज्यदुत पनि यो कुरा स्विकार्छन् । यहांको जनजाति आन्दोलनले नेपालमां विस्तारै मानसिकतामा परिवर्तन पार्न खोजिरहेकोछ र त्यहां कुरा उठ्न थालेकोछ । तर यसको अर्थ के पनि होईन भने उनलाई तत्काल बोलाएर जनजाति महाबाणिज्यदुतलाई पठाईन्छ । सत्तामा कायापलट नहुदासम्म जुन दल आएपनि उनलाई बोलाईने संभावना न्युन छ । जनजाति महाबाणिज्यदुत पर्खने भनेको अबको ४ बर्षपछि कै लागि हो । त्यसैले एउटा निश्चित बुँदामा मिल्नैपर्ने हुन्छ ।
महाबाणिज्यदुतलाई यदि हङकङबाट निकाल्न सकिदैन भन्ने महसुस सबैले गरिएको हो भने तिनलाई सेफ एक्जिट दिने काम पनि हङकङबासीकै हो । दावि गरिए जस्तै ९८ प्रतिशत जनसंख्या भएको जनजातिले नै हुन् । उनी मात्र होईन जनजाति महासंघलाई पनि मुद्दालाई निरन्तर अगाडि बढाउदै सुरक्षित अवतरण गर्नुपर्ने चुनौती छ । सात बर्ष देखि चलिरहेको यो संघर्षमा अब सामान्य मान्छेको भावना समेत गासिन थालेकोछ । उसले आन्दोलन छाड्यो रे भन्नासाथ उसमाथि संस्थागत बज्रपात पर्ने डर रहन्छ । त्यसैले उसले बारम्बार सबै संस्थालाई अन्र्तक्रिया गराएरै यो संघर्ष बढाईरहेको देखिन्छ । पुनः वार्ताका लागि उसले अर्को भेला गर्न गैरहेकोछ ।
यी माथिका बुँदा दुबै संस्थाका बाध्यता हुन् । यहि बाध्यताभित्रबाट समस्याको निकास निकाल्न पर्ने हुन्छ, जुन सहज छैन । सहमति गरेर महाबाणिज्यदुतलाई सामाजिक संस्थामा फुकुवा गरिदिनासाथ यो आन्दोलनमा हिडेकाहरु बिच्कन शुरु गर्नेछन् । अस्ति भएको वार्तालाई लिएर केहि जनजाति नेताहरु सन्तुष्ट देखिएनन् । तिनले फेसबुक मार्फत त्यसको खुलेर विरोध गरेकाछन् । यस्तो कट्टरपना बार्ताका लागि सधैं वाधक हुने गर्छन् । यद्यपि कट्टर हुनुका पछाडि कारण छन ।
यसघिका महाबाणिज्यदुत बिनोद उपाध्ययायसंग २०१० मा लिखित सहमति गरि दुबै संस्थाको सुरक्षित अवतरण गरिएकोथियो । उपाध्यायले पनि अहिलेका महाबाणिज्यदुतले जस्तै जनजाति आन्दोलनमा नैतिक सथर्मन रहेको र जनजाति ल्याउन सहयोग गर्ने भन्दै ३ बुदै सहमति समेत गरेकाछन् । तर उनी गएपछि पुनः पुरानै नियति दोहोरिएकोले अहिलेका कन्सुलरले पनि आफु बस्न नाटक गरिरहेकाहुन् आफु जाने बेला सबै बिर्सन्छन् भन्ने तिनमा बलियो मान्यता बस्न थालेकोछ । धोका हुन्छ भन्ने तिनमा परेकोछ । त्यसैले विशेषगरि युवाहरु वार्ता प्रति त्यति सकारात्मक देखिदैनन् । तर समस्याको निकासका लागि वार्ताको विकल्प छैन ।त्यसैले दुबै पक्षले मुट्ठी पारेर वार्तामा बसेर समाधान निस्कदैन । हात खुला गरेर कुरा अगाडि बढाउनुपर्छ ।
बैठकमा महाबाणिज्यदुतले के बोले ( भिडीयो )
महासंघले महाबाणिज्यदुतलाई सामाजिक संस्थामा आवतजावत गर्न वातावरण मिलाईदिने अर्थात बहिस्कार फुकुवा गरिदिने र कन्सुलर कार्यालयले पनि आफुले गर्न सक्ने सक्दो निर्णय गरि महासंघलाई आश्वस्त पार्न जरुरी छ । जस्तै, जनजाति महाबाणिज्यदुत मागमा कुटनीतिज्ञले जे जे गर्न संभव छ गरिदिने, स्थानीयहरुको कार्यालय सम्बन्धि मागहरुलाई महासंघलाई जस जानेगरि पुनःसंरचना वा सम्बोधन गरिदिने । जनजातिहरुका निम्ति कन्सुलर कार्यालय अनुदार छ भन्ने आरोप छ त्यसमा खुलेर छलफल चलाई त्यसमा मिलेर काम गर्न सक्छ । महाबाणिज्यदुतको सिफारिसमा आउने बजेट र गरिदिनुपर्ने सिफारिसमा अमुक कुनै संस्थालाई मात्र नगरि जनजाति महासंघ लगायतका संस्थालाई पनि गरिदिने बाचा गर्नसक्छ । त्यो गरेरै आश्वस्त पार्न सक्छ । यसबर्ष देखि हिन्दु चाडका विदाहरु जसरी घटाइएकाछन् र अफिस समय जसरी ब्यवस्थापन गरिदैछ त्यो शुभ प्रारम्भ हुन् ।
यी र यस्ता विषयमा बसेर महासंघसंग महाबाणिज्यदुतले गम्भीर वार्ता गरेहुन्छ ।
महासंघका नेतृवत्ले पनि आफ्ना बाध्यता र सीमा आउने १४ जुलाईका बैठकमा खुलस्त राखेहुन्छ । क्रान्तिकारी देखिने होडमा ब्यावहारिक पक्ष ओझेलमा पर्न गएको हुन्छ जनजाति आन्दोलनकारीहरुलाई त्यो यथार्थ बुझाइदिए उनीहरु नमान्ने कुरै छैन । गएको बैठकमा दुबै पक्षबाट यहि बिषयमा कुरा नगरिएकोले कुरा नमिलेको हो । ईमान्दार साथ गरे मिल्छ, कुरा ।
नेपाली समाजलाई दुबै संस्था उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन् । महासंघलाई अवज्ञा गरेर कोहि अगाडि बढ्न सक्दैनन् भन्ने त महाबाणिज्यदुत बहिस्कार आन्दोलनले देखाईसकेकोछ । अहिले सम्म उनलाई कुनै संस्थाले बोलाउने आंट गरेका छैनन् । बोलाइए जे पनि हुने भन्दै जनजाति युवाहरुको प्रतिकार समिति बनाइएपछि सबै चुप छन् । त्यसैगरि महाबाणिज्यदुतलाई कोठामा कैद गर्देमा उनको राजकाज रोकिदैन भन्ने कुरा पनि हामीले बुझेकै छौं । बरु देशको लागि दुबै संस्था मिलेर जादा त्यसले दुबै संस्था, समाज र नेपाललाई नै फाईदा पुग्नेछ । आन्दोलन पनि चलि नै रहिरहन्छ र महाबाणिज्यदुतले पनि ढुक्कसाथ समाजको काम गर्न सक्नेछन् । महाबाणिज्यदुतले यस्ता कुरालाई बढी लम्ब्याए यसले हङकङ मात्र होईन विश्वमै आगोको रुप लिन्छ भन्ने बुझ्नुपर्छ । नेताहरुका आश्वासन र हरेकचोटी जनजातिहरुलाई दिइएको धोकाका कारण यो आन्दोलनले ध्रुबीकरणको यो रुप लिएको हो । यो विश्वभर फैलिरहेकोछ, कालो झण्डाको रुपमा । हङकङबाटै माधव नेपाललाई कार्यक्रम स्थलमा कालो झण्डा देखाउन प्रारम्भ गरिएकोथियो, जुन विश्वभर फैलिएकोछ ।
त्यसैले विलम्ब नगरि यस्तो संवेदनशील मुद्दामा आउदो वार्ताले दुबै संस्थाको बाध्यतालाई आत्मसात गर्दे एउटा मोडमा आई सम्झौताको रुप लेओस्, शुभकामना छ ।
जनजाति महाबाणिज्यदुत माग आन्दोलनको ७ बर्ष - चित्रमा
- जेवी पुन मगर
Last Updated on Thursday, 04 September 2014 11:57
द्रब्य,ड्रग्स र सेक्स लतले छोरा दाँऊमा !
गोलीको बोली मात्र बुझ्ने नेपाली राजनीतिको डरलाग्दो पाटो
किन बांच्नुपर्छ खपाङ्गी (एक राजनेताको योगदानको शल्यक्रिया)
एनआरएन हङकङ भित्रको किचलोको अन्र्तवस्तु